अक्षय कुमारलाई हात्तीको गोबरबाट बनेको चिया पिउन समस्या भएन, गरे यस्तो ठूलो खुलासा ! -अक्षय कुमारलाई हात्तीको गोबरबाट बनेको चिया पिउन समस्या भएन, गरे यस्तो ठूलो खुलासा ! -
अक्षय कुमारलाई हात्तीको गोबरबाट बनेको चिया पिउन समस्या भएन, गरे यस्तो ठूलो खुलासा !
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:२३ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । खतराहरूको खेलाडी मानिने भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार चाँडै टिभीमा उसको शो ‘इन्टु द जंगल विल बियर ग्रिल्स’ मा लोकप्रिय अनुहार बियर ग्रिल्सको साथ देखा पर्नेछ। यस शोको शुटिंगको क्रममा अक्षयले आफ्नो प्रकृति अनुसार धेरै अचम्मका अभिनय गरे। यी मध्ये एउटा हात्तीको गोबरको चिया बनाउने र पिउने थियो। यस प्रकारको काम अक्सर टिभीमा बियर गर्दै गरेको देखिन्छ, तर अक्षयको लागि यो पहिलो पटक थियो। र हालसालै कुराकानीको लागि कुरा भिडियो च्याटको बेलामा भयो।
अक्षय कुमार हाल स्कटल्याण्ड मा आफ्नो आगामी फिल्म Belbottom को लागि शूटिंग गर्दै छन्। उनले यस फिल्ममा वाणी कपूर, हुमा कुरैशी र लारा दत्ता पनि मुख्य भूमिकामा लिएकी थिइन। बियर ग्रिल्ससँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा, हुमा कुरेशीले अक्षयलाई सोधे कि उनले आफूलाई हात्तीको गोबर अर्थात् लादीबाट बनाएको चिया कसरी पिउन तयार गरे।
यसको जवाफमा अक्षयले भने, ‘मलाई कुनै समस्या भएन। वास्तवमा, मैले यसको विपरीत रमाईलो गरें। म आयुर्वेदिक फाइदाहरूको लागि दिनहुँ गोमूत्र पिउँछु। त्यसैले यो मेरो लागि ठूलो कुरा थिएन।
अक्षय कुमारले Bear Grylls को साथ कर्नाटकको बांदीपुर नेशनल पार्कमा कार्यक्रमको शुट गर्नुभयो। यो १ सेप्टेम्बरमा टिभीमा प्रसारण हुँदैछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा विशेषज्ञहरू का सुपरिवेक्षणमा सबै काम गरिन्छ, तर एक दृश्यको क्रममा अक्षय कुमारको शूटिंगमा गम्भीर चोटपटक लागेको थियो। उहाँ एक ठाउँमा चढ्दा चोट लाग्यो।
अक्षय पहिले डोरी चढ्दै थिए तर यो चढाई उसको लागि केही नयाँ थियो। यसमा उसले एउटा खुट्टा अगाडि र अर्को खुट्टा पछाडि राख्नुपर्थ्यो। यद्यपि यो उनको लागि नयाँ अनुभव थियो।
अक्षय आफ्नो एक फिल्म Belbottom को लागि शुटिङ गर्दै छन्। यस बाहेक उनको एक फिल्म ‘सूर्यवंशी’ पनि तयार छ र सिनेमाघरहरू खोल्न कुर्दै छ। अक्षयको फिल्म ‘पृथ्वीराज’ पनि अपूर्ण छ जसमा उनले घर फर्केपछि काम सुरु गर्नेछन्। अक्षयको नाम पनि ‘बच्चन पाण्डे’ र ‘अत्रंगी रे’ जस्ता फिल्मसँग सम्बन्धित छ।
कोरोनाभाइरस बारे नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र ‘कोरोना’ सार्वजानिक (भिडियो)
ग्लेसियर इन्टरनेसनल स्कुल एबं कलेजको ब्राण्ड एम्बेसडरमा अभिनेता बिपिन कार्की
नायक भुवन केसीद्धारा साम्राज्ञीविरुद्ध १० करोड क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दर्ता